MARA UKMIL Boeing Chinook HC2 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 31 117
Nke a bụ UKMIL Chinook mepụtara na GMAX maka FSX. N'iji nghazi ihe omimi na udiri DDS, ihe omuma ya bu nke ndi FSX SP2 /P3D. Na-agụnye kokpiiti mepere emepe (VC) na ọtụtụ nlele / ọnọdụ, ihe ngosi dị ka imeghe ibu n'azụ wdg dabere na ihe nlereanya. Gụnyere ụda omenala na ederede 12 si mba dị iche iche.
The Boeing Kra-47 Chinook bụ ihe American ejima-engine, tandem rotor arọ-inwego helikopta. Na a top ọsọ nke 170 mara akpụ (196 mph, 315 km / h) na ọ bụ ngwa ngwa karịa dịkọrọ ndụ na ịba uru na agha helicopters nke 1960s. The Kra-47 bụ otu n'ime ole na ole ugbo elu nke oge ahụ na ka na mmepụta na n'ihu na oku ọrụ, na n'elu 1,179 wuru ka ụbọchị. Bụ isi ọrụ na-agụnye troop ije, ogbunigwe emplacement na n'ọgbọ agha resupply. Ọ nwere a dịgasị loading ramp ebe azụ nke fuselage na atọ mpụga-ibu hooks.The Chinook e mere na ibido emepụta site Boeing Vertol ná mmalite 1960s. The helikopta na-now-emepụta site Boeing Rotorcraft Systems. Chinooks na e rere ndị 16 mba na US Army na Royal Air Force (lee Boeing Chinook (UK variants)) kasị ukwuu ọrụ. The Kra-47 bụ n'etiti ndị kasị arọ na-ebuli Western helicopters. (Wikipedia)
Onye edemede: UKMIL